Miahiahy Momba Ny Kabinetran’ny Filoha Vaovao Ireo Bilaogera Iraniana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Novambra 2017 3:34 GMT
Manoratra i S'can-Iranic fa mpikambana ao amin'ny Tafika Revolisionera Islamika na miara-miasa akaiky amin'izany ny ankamaroan'ireo olona notendren'ny filoha Ahmadinejad ao amin'ny kabinetrany. Heverina ho hery matoky indrindra ireo mahery fihetsika ny Mpiambina Revolisionera. Tao anatin'izay taona vitsivitsy lasa izay, tafiditra lalina tamin'ny fandraharahana sy ny varotra ny mpikambana ao amin'ity tafika ity.
Mazava fa ho lasa fehezin'ny miaramila ny firenena ary manana ny teny holazain'izy ireo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra ao amin'ny governemanta ny tafika Revolisioinera. Tamin'ny tafatafa nifanaovany tamin'ny WashingtonPrism, nilaza i Majid Tehranian, mpampianatra Fifandraisana monina ao Etazonia, fa efa nisy taonjato vitsivitsy lasa tao amin'ny firenena ity karazana fitantanana miaramila ity. Nitondra miaramila andevo Tiorka tao amin'ny sampany ny mpanjaka fahiny, Abbasid Khalifa. Saingy taty aoriana, nanomboka nifehy ny firenena ireo miaramila andevo ireo ary lasa miha-matanjaka kokoa noho ny Kalifa !!
Nitatitra i Dokhtarak avy ao Shiraz fa misy ny fanarahamaso betsaka hijerena ny taniravo eny amin'ny endriky ny vehivavy na ny fitafian'izy ireo eny an-dalambe. Matetika misy olona voasambotra ary mandany alina na roa any am-ponja. Manamarika izany fa miverina amin'ny vanim-potoana fanavaozana akaiky isika ary hahafantatra ny olona fa nisy ny (FAHASAMIHAFANA) teo amin'ny reformista sy ny mpandala ny nentim-paharazana !! Na izany aza, ny vaovao tsara dia nanajanona ny fitokonany tsy hihinan-kanina naharitra 70 andro i Ganji, mpanao gazety nogadraina. Ny vaovao ratsy dia mbola any am-ponja izy ary mbola manohy ny fitokonany tsy hihinan-kanina naharitra 40 andro ireo gadra politika hafa tahaka an'i Manoucher Mohamdai, mpitarika mpianatra voafonja nanomboka tamin'ny taona 1999 .
1 ora izayTiorkia